iphone 3G iOS 3.1.3 — MYSTERY ZILLION
June 2011 edited June 2011 in iPhone
ကျွန်တော့်ဖုန်း LOCK ကျသွားပါတယ်။ အပေါ်ဆုံးမှာ Key ပုံလေးပေါ်နေပါတယ်။
JB လုပ်ထားတဲ့ ဟာကို 3.13 နဲ့ restore ပြန်လုပ်လိုက်တာ ပီးသွားတော့။ ဖုန်းကို restart ပြန်ချတော့ ဖုန်းက Lock ကျပီးတော့ ပေါ်ဆုံးမှာ သော့ပုံလေးပေါ်နေပါတယ်။
ဘယ်ကနေဘယ်လိုပြန်စလုပ်ရမလဲမသိဘူး။ SIM LOCK ကျတာမဟုတ်ပါဘူး။ Phone ကိုက Lock ကျသွားတာပါ။
Zawgyi is not allowed in MZ.
I fixed to Unicode. Please, don't use Zawgyi in MZ.
sorry4using zawgyi. help me Step by step how to do please!
When i press the program button on the bottom of the iphone device. Once the "slide to unlock" option appears, and slide the "arrow" object to the right, then emergency call function appear.how to fix....???????????
မှာဝင်ကြည့်ပြီတော့ ရှာကြည့်ပါလား။ အဲ့မှာ iphone အကြောင်းတော်တော်စုံပါတယ်။ ကိုယ်ဖြစ်တဲ့ error တွေကို ရှာကြည့်ပေါ့ ။ (ဖြေပေးတဲ့ လူမရှိသေးလို့ လမ်းညွန်း ခြင်းဖြစ်ပါတယ်)
Thanks4yr sharing buddy!